Madheshvani : The voice of Madhesh - प्रदेश २ सरकारको पूरै टिमलाई नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौं : प्रहलाद गिरी गोश्वामी
प्रहलाद गिरी गोश्वामी, प्रदेश २ सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
— अहिलेको टिमलाई परिवर्तन गरिएन भने आठ वटा जिल्लामा सीमित भएको हाम्रो पार्टी झन् खुम्चिने छ । मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा करोडौं करोडको बजेट लगिरहेका छन् । हामी सत्तारुढ दलको सांसद भएपनि संसदीय कोषबाहेक पाँच पैसाको बजेट गएको छैन । यसरी सरकार चल्छ ? यसरी पार्टी स्थापित हुन्छ त ? प्रदेशका मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि आफ्नो टोलमा सीमित छन् र अधिकांश मन्त्रीहरु कमिशनखोरीमा लिप्त छन् ।